ZEC Yotenda Kuti Humhizha MUkufambiswa kweMashoko Hunogona Kushandiswa Kudzidzisa Vanhu neZvesarudzo
Kubvumbi 29, 2016
Mukuru wesangano reZimbabwe Youth Council Vasungano Chisina vanoti sangano reZimbabwe Electoral Coimmission kana kuti ZEC rakabuda pachena kumusangano wakarongwa neNational Association of Youth Organization kana kuti NAYO kuKadoma Ranch Motel.
Musangano uyu wakatanga nemusi weChipiri ukapera neChishanu wainge wakanangana nekudzidzisa vechidiki nezvehumhizha mukuburitwa kwemashoko kana kuti digital media.
VaChisina vakaudza Studio 7 kuti kubva kune zvakataurwa nevesangano re ZEC vainge vari kumusangano uyu, musarudzo munogona kushandiswawo digital media iyi.
“Kubva kune zvakataurwa nevaimirira ZEC pamusangano uyu zvakabuda pachena kuti muZimbabwe vanhu vapfumbamwe pagumi vane nharembozha kana kuti vari pedyo nayo nekudaro pakashandiswa nharembozha pakudzidzisa vanhumashoko anogona kufambiswa nechimbi chimbi mukunyoresa nekudzidzisa vanhu nezvesarudzo.”
VaChisina vatenda kuti vechidiki vemuZimbabwe vachine rwendo rwurefu mukukwanisa kushandisa humhizha hwechizvino zvino mukuita mabasa akasiyana siyana.
“Tadzidza zvakawanda. Asi chikuru chatadzidza ndechekuti vechidiki vakawanda havana ruzivo nezvekushandisa digital media. Se Zimbabwe Youth Council tave kutoenda kunobuda negwaro rekuti tidzidze vechidiki nezvekushandisa digital media mumabasa akasiyan siyana.”
Hatina kukwanisa kubata mukuru weZEC Amai Rita Makarau sezvo vange vasiri kudaira nhraembozha ravo.
Musangano uyu wakaparurwa neNAYO nemusi weChipiri nechinangwa chekudzidzisa vechidiki nezvekushandisa humhizha hwechizvino zvino kana kuti digital media kuti vapinde muzvirongwa zvehutongi hwejekerere zvakaita sesarudzo nezvimwe.
Humhizha uhu hunosanganisira kushandisa nharembozha nemadandemutande akaita seFacebook, WhatsApp ne Twitter.
Musangano uyu uri kuitirwa kuKadoma Ranch Hotel uye uri kutarisirwa wakapera nemusi weChishanu.
Sangano reNAYO isangano remuZimbabwe rinoyedza kuunza kuyanana mune vechidiki kuitira kuti vamise nyaya dzemhirizhonga.
Musangano uyu wange wakanangana nekukurudzira nhaurirano pakati pevechidiki vemuZimbabwe neve kunze kana kuti Dialogue Exchange Program.
Vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevakomana nevasikana musangano iri, Muzvare Starline Mukumbachore, vanoti chinangwa chavo chikuru ndechekukurudzirawo kushandiswa kwemichina yechizvino zvino munyaya dzesarudzo. Izvi vanoti zvakanangana nesarudzo dzichazoitwa muna 2018.
Hurukuro naVaSungano Chisina